တစ်ပတ်ရစ်ကားများ အပါအဝင် Brand New ကားစီးရေ နှစ်ရာကျော်ခန့်ကို အွန်လိုင်းလေလံ စနစ်ဖြင့် ရောင်းခ? - Yangon Media Group
တစ်ပတ်ရစ် ကားများအပါအဝင် Brand New ကားစီးရေ နှစ်ရာကျော်ခန့်ကို အွန် လိုင်းလေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအွန်လိုင်းမော်တော်ယာဉ် လေလံပွဲကို မတ် ၁၆ ရက်နှင့် ၁၇ ရက်တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မိုင်ဒါကွင်း တွင် ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး CarsDB နှင့် Toyota TSUSHO တို့ ပူးပေါင်း၍ အွန်လိုင်းမော်တော်ယာဉ် လေလံပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါလေလံပွဲတွင် ဝင်ရောက် ရောင်းချရန် စာရင်းပေးထားသည့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်နှင့် အိမ်စီးယာဉ် စုစု ပေါင်းစီးရေ ၂ဝဝ ကျော်ခန့်ရှိပြီး အွန် လိုင်းလေလံစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူရန် အကောင့် ဖွင့်လှစ်စာရင်းသွင်းသူ တစ်ရာကျော် ခန့်ရှိကြောင်း CarsDB မှ COO ဦးဝေဖြိုးကျော်က ပြောသည်။
မတ် ၁၆ ရက်က မိုင်ဒါကွင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲကြီး(Auto Auction Fair 2019) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အပြီးတွင် မီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုကို အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ”ဖွံ့ဖြိုးပြီးဈေးကွက်တွေမှာ မော် တော်ယာဉ်လေလံပွဲတွေ၊ လေလံစနစ် နဲ့ ရောင်းချတာတွေက တော်တော်တွင် ကျယ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လေလံ ကို သမားရိုးကျ လေလံစီစဉ်သူက နည်းပညာမပါဘဲ လေလံပွဲတွေလည်း လုပ်လို့ရတယ်။ တစ်မူထူးခြားစွာနဲ့ မြန်မာ မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အွန်လိုင်းက လေလံဆွဲလို့ရ အောင် စီစဉ်လိုက်တာ။ လေလံဈေး ကွက်တွေ ရှိလာတာနဲ့အမျှ တပတ် ရစ်ကားတွေကို ဝယ်ယူလိုသူတွေ အဆင်ပြေလာတယ်။ ကားနဲ့ပတ် သက်လို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စစ်ထားတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း လာကြည့်လို့ရတယ်။ ဝယ်တဲ့သူအတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာ တယ်။ ကြမ်းခင်းဈေးကနေ ပစ်လို့ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်တင့်တဲ့ဈေး တစ်ခု နဲ့ရမှာဖြစ်သလို ရောင်းသူအတွက် လည်း အဆင်ပြေတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မတ် ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ လေလံပွဲတွင် ပါဝင်ရောင်းချလိုသည့် ကားများနှင့် အရောင်းစင်တာများကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး လေလံပွဲတွင်ရောင်းချ မည့် ကားတစ်စီးချင်းစီအား နိုင်ငံ တကာလေလံပွဲ အတွေ့အကြုံရှိသည့် Toyota TSUSHO ၏ နည်းပညာဖြင့် အချက်ပေါင်း ၂ဝ၈ ချက်နှင့် စစ်ဆေး ကာ ပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဦးဝေဖြိုးကျော်က ” CarsDB နည်းပညာနဲ့ Toyota TSUSHO နည်းပညာတို့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ တစ်မူ ထူးခြားတဲ့ အွန်လိုင်းကနေ တစ်ခါတည်း ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ရတဲ့ လေ လံပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မတ် ၁၆၊ ၁၇ ရက်မှာ ဝယ်ယူသူတွေအားလုံးကို ဖိတ် ထားတယ်။ လူတိုင်းကားဝယ်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာဝယ်လို့ရ မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ လေလံပွဲ (Auction)ဆော့ဝဲလ်မှ အကောင့်ဖွင့် ပြီး လေလံပစ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ လေလံပွဲရှိသည့်အတွက် ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့်လည်း သင့်တင့် သောဈေးနှုန်းနှင့် ရရှိနိုင်သကဲ့သို့ ရောင်း ချသူများအနေဖြင့်လည်း ရောင်းလိုသည့် ဈေး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မော် တော်ယာဉ်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း များရှိသင့်ကြောင်း မြန်မာမော်တော် ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်း ချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ထိုက်အေးက ပြောသည်။ အဆိုပါလေလံပွဲသို့ ဝင်ရောက် ရောင်းချသည့်ယာဉ်များတွင် Brand New ကားများထက် ဂျပန်တစ်ပတ် ရစ်ကား ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး ပါဝင် ကြောင်း သိရသည်။
'ကာရိုက်တာတိုင်း ဇာတ်လမ်းတိုင်းကို သစ္စာရှိပြီး အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးပဲ ??